Otu esi eme ka & hazie mkpakọ Gzip na Nginx - LinuxCapable
October 29, 2021 June 8, 2021 by Jọshụa James
GZIP kachasị - Ntọala ntọala
Ọkwa mkpakọ - gzip_comp_level #;
Ogologo mkpakọ kacha nta - gzip_min_length #;
Mkpakọ dị iche iche nkụnye eji isi mee – gzip_proxied #;
Ụdị Mime mkpakọ
Nginx kachasị elu na ntọala GZIP
Okwu na Nkwubi okwu
Akụkụ nke ọrụ weebụsaịtị ọ bụla bụ ijide n'aka na ndị ọbịa nwere ike ịlele saịtị ahụ ngwa ngwa o kwere mee. N'agbanyeghị nke ahụ, otu n'ime ihe kachasị akpata mbelata bụ ịkwanye akụrụngwa dabere na nha nwere ike imetụta weebụsaịtị na-enweghị GZIP enyere aka na webụsaịtị yiri ya.
NGINX bụ ezigbo sava weebụ, wuru maka ọsọ ọsọ, dị fechaa ijikwa ọtụtụ njikọ, ọ na-abịa na nkwado GZIP, mana nke a nwere ike ịbụ mma agha ihu abụọ ka iji GZIP na-abawanye ojiji CPU. Dabere na ihe nkesa gị na akụrụngwa ya, ọ nwere ike inwe mmetụta dị iche na-enyere ya aka na-enweghị nkwalite.
Ya mere mmasị na isiokwu dị anya? N'ime nkuzi anyị, ị ga-amụta ntọala GZIP bụ isi.
Nke mbụ, gaa na ndekọ nginx gị wee mepee ya nginx.conf faịlụ.
Na-esote, detuo ntọala ndị a kachasị mma maka mmeghe maka mkpakọ.
Nke a dị mma maka sava ndị na-enweghị ọtụtụ ihe onwunwe iji chekwaa. Ọ bụ isi ma na-arụ ọrụ.
Ị nwere ike ịnọ na-eche tupu anyị eleba anya na ntọlite ​​​​kawanye elu ihe ụfọdụ okwu pụtara.
Enwere ike ịtọ gzip_comp_level n'etiti 0 ruo 9. Nke kachasị elu ọkwa mkpakọ, a na-etinye mkpakọ dị elu. Mgbe ọkwa mkpakọ dị elu dị ka max ga-abụ 9, mgbe ahụ achọrọ CPU ọzọ. Ọ bụrụ na ihe nkesa gị na-agbasi mbọ ike na ojiji CPU, a na-atụ aro ka ị nọrọ n'etiti etiti ka azụmaahịa maka ịbawanye ntọala a pere mpe, na ị gaghị ahụ ihe dị iche na nsonaazụ ya.
Nginx na-eji mkpakọ mgbe ogologo nzaghachi dị ịrịba ama karịa 1000 bytes nke enweghị ike ịgbanwe. Ị nwere ike ịtọ nke a ala karịa 1000 bytes; Otú ọ dị, maka obere faịlụ, oge a na-ewe iji mpikota onu faịlụ ndị a dị mkpa karịa oge echekwara na mbufe. Ọzọkwa, ị ga na-emechi iji CPU na-enweghị isi, na n'ọnọdụ ụfọdụ, ị nwere ike ịbawanye nha faịlụ, dị ka faịlụ static dị ka ihe oyiyi nke na-ekwesịghị ịgụnye.
Ntuziaka a na-agwa ndị proxies ka ha chekwaa ma ụdị akụrụngwa ahụ oge niile yana gzipped. Nginx ga-agbakwunye nkụnye eji isi mee naanị mgbe ejiri mkpakọ, dabere na ntọala gzip_min_length.
Ụdị mime dị n'ime gị /yourlocation/nginx/mime.types bụ ụdị ọdịnaya edepụtara na Nginx gị nke GZIP nwere ike mpikota onu ma ọ bụrụ na edepụtara ya. Anyị depụtara naanị ndị bụ isi; Otú ọ dị, ị nwere ike ịpịkọta ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ. Cheta ka ị ghara gzip static faịlụ dị ka onyonyo, n'ihi na ọ ga-enwe mmetụta ọjọọ.
Naanị faịlụ ọnụọgụ abụọ enwere ike iji onyonyo chịkọta bụ "Onyinye/svg+xml"
N'okpuru ebe a, anyị ga-egosi ihe atụ nke nhazi ọkwa dị elu karị, enwere ike ịme ọtụtụ ihe, yana ị kwesịrị ịnwale ihe na-arụ ọrụ nke ọma na ihe nkesa gị n'okpuru ibu dị ndụ.
Cheta, gị nginx.conf dị na folda nginx.
Maka nnwale emesia, webụsaịtị ole na ole dịka Onyinye maka ọsọ ọsọ na SiteCheckerPro nwere ike ime ule ịntanetị. Nke a nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mfe iji gwa ka ihe nkesa gị si arụ ọrụ n'okpuru ibu sitere na isi mmalite.
GZIP bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji kwalite webụsaịtị gị tupu ngwanrọ mbelata enwee ike ịgbaka ma mebie weebụsaịtị n'oge nhazi. GZIP agaghị emetụta webụsaịtị gị n'ụzọ na-adịghị mma ọ gwụla ma ị debere ọnụego mkpakọ na CPU nke ukwuu ma ọ bụ ogologo opekempe dị ala ebe ọ na-akpakọ faịlụ ndị na-adịghị mkpa.
Ọtụtụ ọnụ ọgụgụ na-agwa gị ka ị na-agba ọsọ bụ ihe dị ịrịba ama maka ọkwa SEO, na ngwọta a dị mfe nwere ike ịbụ ihe dị iche na ịnweta okporo ụzọ na ogologo oge.